ukuvavanya inethiwekhi kunye neapos 5g yenethiwekhi kwisixeko saseNew york: nazi izantya eziphezulu esizifumeneyo
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ukuvavanya iVerizon & apos; inethiwekhi ye5G kwisiXeko saseNew York: nazi izantya eziphezulu esizifumeneyo
Ukuvavanya iVerizon & apos; inethiwekhi ye5G kwisiXeko saseNew York: nazi izantya eziphezulu esizifumeneyo
Kuvakala ngathi besilindele ukufika okuzayo kohlaziyo lwe-5G iminyaka, kodwa ngoku, kwi-2020, kukhuselekile ukuthi ekugqibeleni kudlulisiwe ukuboniswa kwaye kwaqhakaza ngokwenene kwinto umsebenzisi oqhelekileyo anokuyithatha. Isibhengezo seQualcomm's Snapdragon 865 chipset esondeleyo kwinkxaso ye5G kwicandelo lonke le-Android, kwaye wonke umphathi omkhulu wase-US ngoku unegunya elifanelekileyo kwizixeko ezikhulu kwilizwe liphela.
Ke, uxhobe ngeMoto Edge + entsha, imephu yokugubungela i-Intanethi, kunye ulwazi lokuba i-5G ayibangeli i-COVID-19 , Besikulungele ukuya kuvavanyo lwenethiwekhi yeVerizon's 5G entliziyweni yeSixeko saseNew York.
Ukuphinda ubuye ngokukhawuleza kwinethiwekhi yeVerizon ye5G, umphathi uphethe uxhulumaniso lweMMWave, enye yeendlela ezimbini ze5G ezikhoyo ngoku. Xa kuthelekiswa ne-sub-6Ghz, elinye icandelo eliphambili lomboniso, i-mmWave ithiyori ixhasa isantya esikhawulezileyo-kodwa ayenzi kakuhle nasekulawuleni ukuphazamiseka kwiindonga nakwizakhiwo, isenza unxibelelwano lube buthathaka ngakumbi.
Indawo A: 3rd Avenue, Turtle Bay
Inethiwekhi ye-UWB yeVerizon ye5G ikhona kwiindawo kunye neepatches ngaphesheya kweManhattan, eneendawo zokuhlala ezidityanisiweyo ngokuphawulezileyo (ngesiqhelo) indawo yaseMidtown ephithizelayo. I-Turtle Bay yenye yeendawo ezizolileyo apho ulwamkelo lwe-5G lufumaneka khona, kwaye aluzange ludanise ngovavanyo lwethu, umndilili wokukhuphela isantya se-895 Mbps, hayi kude kakhulu ukusuka kwi-1 Gbps ephezulu yentengiso.
Ewe, ulwamkelo lwe5G luphawu olugqibeleleyo. Kungathatha ukukhangela kancinci ukufumana indawo enonxibelelwano olufanelekileyo, kwaye kwangoko isantya asihambelani ngokugqibeleleyo, kodwa isantya sokwenyani sobomi bokwenyani sibonakalise ukuphucuka okubonakalayo kunxibelelwano oluqhelekileyo lwe-LTE. Ukugcina ividiyo eyi-500MB kwiNetflix kuthathe imizuzwana engama-42, ngelixa ukhuphele i-Asphalt 9 kunye nayo yonke idatha eyimfuneko eyongezelelweyo ithathe nje imizuzu emithathu. Ukuthelekisa, ikhaya lam elikhawulezileyo i-Wi-Fi lithathe ngaphezulu kwemizuzu elishumi kolo fakelo lunye, ngelixa isantya se-LTE sifuna ukuya kuthi ga kwiyure.
Indawo A, Ukuvavanywa ngokukhawuleza kunye ne-Speedtest ngu-Ookla:
Uvavanyo # 1 652 Amashumi amabini 9
Uvavanyo # 2 Ngama-866 32 Mbini
Uvavanyo # 3 1212 10 4
Uvavanyo # 4 849 28 52
Umyinge 895 22.5 16.8
Indawo A, iNetflix kunye neeVenkile zokuDlala zokuKhuphela kwiVenkile
Ubungakanani Befayile Khuphela
Ividiyo engama-500MB Imizuzwana engama-42
Ividiyo ye-700MB Imizuzwana engama-92
Isicelo se-1.8GB Imizuzwana eyi-178
Isantya soMndilili 9.6 MB / yesibini
Indawo B: 45 Street, Times Square
Unxibelelwano lwenethiwekhi elandelayo ye-gen kulula kakhulu ukuyifumana kwi-Times Square, ke umjikelo wethu olandelayo wovavanyo wenzeka ngaphandle kwekhefi nge-45th St. Apha, inethiwekhi ibonakala ngathi yomelele ngakumbi, ngokuguquguquka okuncinci kunye nokuhambelana okungcono kwesantya. Le ndawo ikwalapho sifumene khona isantya sokukhuphela kwincopho ye-1.36Gbps engakholelekiyo, ebonisa ubukho benethiwekhi ye-5G kungekudala.
Indawo yethu yesibini yovavanyo inikezele ngesantya esikhawulezayo, kunye nokubambezeleka okungcono kunye nozinzo
Ukukhuphela isantya kubomi bokwenyani kwakukhawuleza ngokukhawuleza apha, nangona kungekho kuvavanyo lobomi bokwenyani oluye lwasondela kwisantya i-5G eyayinokuhambisa ephepheni ngesixhobo esikhoyo senethiwekhi. Isiqendu esinye sothotho lwantlandlolo lweNetflix esinobunzima obuyi-700MB sithathe ngaphezulu komzuzu ukukhuphela, ngelixa ukufakelwa kwe-Asphalt 9 kwathatha kabini ngelo xesha.
Indawo B, Ukuvavanywa kwesantya ngokukhawuleza ngeOokla:
Uvavanyo # 1 871 17 Isine
Uvavanyo # 2 909 Shumi elinanye 3
Uvavanyo # 3 1353 10 77
Uvavanyo # 4 1364 8 3
Umyinge 1124 11.5 32
Indawo B, iNetflix kunye neeVenkile zokuDlala zokuKhuphela kwiVenkile
Ividiyo engama-500MB Imizuzwana engama-37
Ividiyo ye-700MB 74 imizuzwana
Isicelo se-1.8GB Imizuzwana eyi-136
Isantya soMndilili 12.1 MB / yesibini
Njengoko ime, kukho iindawo ezimbalwa kuphela kwiSixeko saseNew York apho ungasebenzisa khona inethiwekhi ye-Verizon ye-wideband ngaphandle kokuma endaweni enye, ngoko ke ukukhuphela izinto ngokukhawuleza ngokukhawuleza xa uhamba nobomi bakho bemihla ngemihla kunokwenzeka ayizukwenzeka okwexeshana. Kodwa uqhagamshelo lwe5G aluzinzanga kwiindawo apho kupapashwa khona ukuba kubekho.
Ngaba i-5G ibuchaphazela kangakanani ubomi bebhetri?
Lunjani uxinzelelo kwibhetri, ubuza? Nangona zininzi izinto ezijikeleze ukusetyenziswa kwebhetri, ukuvavanywa kwethu kufumanise ukuba iyure yokukhutshelwa kwe5G ikhupha ibhetri phantse kabini kuneyure yokukhuphela i-LTE. Nangona kunjalo, i-5G ithatha ibhetri encinci kakhulu kwigigabyte yokukhuphela, kuba yenzeka ngokukhawuleza. Ke ucinga ukuba wena kunye neapos zisebenzisa kwakhona inani elifanayo ledatha, i-5G ibeka ubunzima obuncinci kubomi bakho bebhetri. Kwelinye icala, i-LTE & apos; ibhettery footprint ikhaphukhaphu kakhulu ekusebenziseni iimeko ezinje ngokusasaza, apho ukukhuphela ngokukhawuleza kwesantya kungenzi ukonga ixesha.
Ukulayisha, uninzi lweenethiwekhi ze5G ekuqaleni zazithembele kwi-LTE, kodwa uninzi lutshintshele kwi-5G emileyo ukusukela. NgeVerizon & apos; s ye5G, sabona i-Mbps ephakathi kumashumi amabini, inencopho ye-43 Mbps. Oku akubonakali kangako kunesantya sokukhuphela kodwa kungcono kakhulu kunomyinge we-LTE wangoku, owela ngaphaya kwe-10 ~ 15 Mbps kwiindawo ezifanayo.
Lilonke, i-Moto Edge + yenza ngokubonakalayo kude kube kukunxibelelana kwe-5G, kwaye iimephu zokugubungela iVerizon kunye nokuqhayisa ngesantya kubonakala kuchanekile ngokunjalo. Uthungelwano olutsha lusenemiqobo emikhulu ekufuneka yoyisiwe ngaphambi kokuba ifikelele kuyo yonke indawo, kodwa sele ifikile ngokubalaseleyo kude, kwaye isantya sokukhuphela ngomlingo esifumanekayo namhlanje sisenza sonwabe ngakumbi kwikamva elizayo.
indlela yokwenza umfanekiso weskrini kwinqaku 20
Qaphela i-20 eyintloko ye-headphone jack
Inqaku lomnyele le-5 microsd slot
Uphengululo olusebenzayo lweSamsung ye-Samsung
I-iPhone X (2018) kunye ne-iPhone X kunye nomhla wokukhutshwa kunye nexabiso? Silindele ...
ISanDisk yazisa nge-200GB yekhadi le-MicroSD
I-Samsung Galaxy Z Fold 3 kunye ne-Z Flip 3 ziya kuthi zabelane ngomhla omnye wokukhutshwa njenge-S21 FE
U-Apple uzama ukweyisela abasebenzisi be-Android ukuba batshintshe ngokuphuculwa kwe-iOS
Eyona iipilisi zeSamsung zokuthenga ngoku (2021)
Ukuhlawulwa kwangaphambili kwe-AT & T (eyayisakuba yiGoPhone) kusungulwa ngeenyanga ezi-2 zenkonzo yasimahla
Iimodeli ezintsha ze5G ze-Apple iPhone 12 zibonisa i-chipset ekhawulezayo kuyo nayiphi na i-smartphone
I-Sprint & apos; s i-4G LTE ayicothi kancinci kune-T-Mobile kunye neapos s network ye-5G, ubuncinci okwangoku